IATA inotsigira European Dhijitari COVID Chitupa senge yepasi rose chiyero
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » IATA inotsigira European Dhijitari COVID Chitupa senge yepasi rose chiyero
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo DCC yakaunzwa munguva yakatarwa kuti ibatsire kufambisa kuvhurwa kweEU nyika dzekufamba. Mukushaikwa kweiyo imwechete yepasi rose zviyero zvejekiseni yedhijitari, inofanirwa kushanda sepuratifomu yemamwe marudzi anotarisira kushandisa zvitupa zvekudzivirira zvemadhijitari kubatsira kufambisa mafambiro pamwe nezvakanakira hupfumi.
EU Dhijitari COVID Chitupa chine mukana wekushandisa mune ese mapepa uye edhijitari fomati.
EU Dhijitari COVID Chitupa QR kodhi inogona kuverengerwa mune ese ari maviri digital uye mapepa fomati.
EU Dhijitari COVID Chitupa chinoitwa mune 27 EU Nhengo nyika.
International Air Transport Association (IATA) yakarumbidza European Commission nekutungamira uye nekumhanyisa kuendesa EU Dhijitari COVID Chitupa (DCC) ndokukurudzira nyika kuti dziite muyero wepasirese wezvitupa zvekudhijitari.
Conrad Clifford, Mutevedzeri Mukuru weIATA
“DCC yakaunzwa munguva yakatarwa kubatsira kubatsira kuvhurwa kwenyika dzeEU kuti dzifambe. "Pakashaikwa chiyero chimwe chete chepasi rose chechitupa chedhijitari, chinofanirwa kushanda sechirongwa cheimwe nyika chiri kutsvaga kushandisa zvitupa zvekubaiwa zvekubatsira kufambisa mafambiro pamwe nezvinobatsira mune zveupfumi," akadaro Conrad Clifford. Iată'' Mutevedzeri Director General.
EU DCC inosangana nematanho akakosha akati wandei akaonekwa seakakosha kana chitupa chekubatira dhijitari chichava chinoshanda:
urongwa: iyo DCC ine mukana wekuti ishandiswe mune ese mapepa uye edhijitari fomati.
QR code: Iyo DCC QR kodhi inogona kuverengerwa mune ese ari maviri digital uye mapepa fomati. Iine ruzivo rwakakosha pamwe nesiginicha yedhijitari kuti uve nechokwadi chekuti chitupa ndechechokwadi.
Kuongorora nekusimbisa: Iyo European Commission yakavaka gedhi iro iro rakanyorwa data rakashandiswa kusaina DCCs uye rinodiwa kuratidza siginicha yesitifiketi inogona kugoverwa muEU yose. Iyo gedhi inogona kushandiswa zvakare kugovera yakavharidzirwa data yevasiri-EU chitupa vanopa vamwe vanopa. EU yakagadzira zvakare kududzirwa kwemuchina unoverengwa Mitemo Yekusimbisa yekufamba-nyika.
EU DCC inoitwa munzvimbo 27 dzeNhengo dzeEU uye zvibvumirano zvakati wandei zvakabvumiranwa nezvimwe zvitupa zvekubaiwa nhomba, kusanganisira Switzerland, Turkey, neUkraine. Mukushaikwa kweyechete muyero wepasirese wechitupa chekudzivirira chitupa, inosvika makumi matanhatu dzimwe nyika dziri kutsvaga kushandisa iyo DCC tsananguro yavo pachavo chitupa. Iyo DCC ndeye yakanakisa modhi sezvo ichienderana neazvino World Health Organisation Guidance uye inotsigirwa zvizere neIATA Travel Pass. Imwe bhenefiti yeDCC ndeyekuti inogonesa varidzi kuwana nzvimbo dzisiri dzendege muEurope dzinoda humbowo hwejekiseni, senge mamuseum, zviitiko zvemitambo nemakonsati.
IATA inoshuvira kupa kubatana kwayo kuEU Commission uye chero imwe nyika inofarira kuenderera mberi nekubatanidza iyo DCC muzvirongwa zvendege kuitira akachengeteka uye asina musono ruzivo rwevatakurwi, senge rutsigiro rwekusarudzika kwekuzivisa kweumwe munhu data.